Archive du 20180525
Hetsiky ny fanovana any Amparafaravola “Miala Rajao fa mampiesona”
Nahitsy ny teny nataon’ny solom-bavambahoaka voafidy tany amin’ny distrika Amparafaravola Rabekijana Solofo Hery, fa mila miala izao dia izao i Hery Rajaonarimampianina, fa nampiesona ny vahoaka aoamin’ny distrikan’Amparafaravola.
Toe-java-misy eto amin’ny firenena Tompon’andraikitra feno ny HCC, hoy i Riribe
Aza terena hiditra amin’ny tsy fanarahan-dalàna ry HCC ny vahoaka mitolona amin’ny fanovana ety amin’ny kianjan’ny 13 mey, hoy i Riribe na Rakotomalala Henri filohan’ny Zatovo.
Miala Rajean Fikafika maloto, tsipy bilao Mahazatra, tampisaka, tena fanao Na ho ianao na ny forongonao Ka ny anay tsotra ihany : « Miala Ra Jean »
Fivorian’ny KMSL Loterana faha-139 Hofaranana amin’ny vavaka lehibe etsy Mahamasina
Hofaranana amin’ny fotoam-bavaka lehibe hotontosaina etsy amin’ny kianjaben’i Mahamasina amin’ny alahady 27 mey izao ny fivorian’ny KMSL na Komity Mpiandraikitra Synoda Lehibe ny fiangonana FLM eto Madagasikara notontosaina ny 22-27 mey 2018 tetsy amin’ny Flm Ambatovinaky
Mbola salama saina ihany ve ?
Mbola salama saina ihany ve ny mpitondra antsika eto amin’ity firenena ity e ? Mbola tena tompon’ny tenany ihany ve ny filohantsika ?
Fahasalamana sy ny andro mangatsiaka Mila mihinana sakafo be gliosida
Efa tafiditra tanteraka ao anatin’ny vanim-potoanan’ny ririnina isika ankehitriny.
Holijaona Rabaonarijaona “Tokony hiteraka tombontsoa ho an’ny Malagasy ny IEM”
Omaly alakamisy 24 mey no nosokafana tamin’ny fomba ofisialy tetsy amin’nyhotely Carlton ny famelabelarana arahina adihevitra momba an’ilay vina IEM nataon’ny filohan’ny tetezamita teo aloha Andry Rajoelina.
Erick Rajaonary Nanatrika ny fivorian’ny AUF tany Montréal
Anisan’ireo vahiny manan-kaja nanatrika ny fivorian’ny AUF ( Agence Universitaire de la Francophonie) tany Montreal – Canada Atoa Erick Rajaonary filoha tale jeneralin’ny Guanomad amin’ny maha mpikambana azy ao amin’ilay komity mpandrindra ny paikady na Comité d’Orientation Stratégique (COS) ao amin’ity fikambanana iray ity.
TEAM Safelika Hanao seho goavana etsy amin’ny ESCA Antanimena
Hanatanteraka seho miavaka etsy amin’ny tokotany malalaky ny CC ESCA Antanimena ny team Safelika ny alahady 27 mey ho avy izao, tafiditra ao anatin’ny fankalazana ny fetin’ny reny.
Kanto Malagasy Nodimandry Ramaroson Mamy
Nodimandry ny alarobia 23 mey 2018 tao amin’ny hopitaly HJRA teo amin’ny faha-67 taonany i Mamy Ramaroson zanak’ilay kalaza Ramaroson Wilson.
MPIANATRA NAMONO “SURVEILLANT”
Iray tamin'ireo mpianatra no nidoboka eny Antanimora ary dimy hafa eny Anjanamasina. Izay no valin'ny fanolorana azy ireo ny fampanoavana omaly, mahakasika ilay raharaha famonoana "surveillant".
Fanadiovana sy fidiovana amin’ny rano Mila ny ezaky ny Malagasy tsirairay
Omaly no nosokafana tamin’ny fomba ofisialy ny atrikasa fampiombonana sy famoriana ireo mpiantsehatra rehetra amin’ny sehatry ny rano sy ny fanadiovana ary ny fidiovana.
Akanjo mafana Manomboka hifandrombahana eny an-tsena…
Raha somary mbola nangingina teo aloha teo ny tsenan’ireo mpivarotra akanjo mafana eto amintsika dia efa mandeha tsara ankehitriny.